Ukunta Easter-ka ee wejigii u dambeeyay ayaa hadda soo shaac baxday waana tan ugu jahwareersan ilaa taariikhda - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Ukunta Easter-ka ee wejigii u dambeeyay ayaa hadda soo shaac baxday waana tan ugu jahwareersan ilaa taariikhda - BGR
View Rakaabka: Dhamaan Tiyaatarka waxaa ku leh cilad weyn: si kasta oo jeer aad u aragto, weli ma aad qabsan karto dhammaan macluumaadka ay bixiso, waxaana laga yaabaa inaad seego ukumo kala duwan oo Easter ah. Sidaa darteed. Sida xaqiiqda ah ee Howard Duck wuxuu marayaa marin muhiim ah si uu ula dagaallamo Thanos. Waa inaad ku daawato filimka guriga, hadda oo ah nooca dijitaalka ah, sidaa darteed waad joojin kartaa aqrinta markasta oo aad ubaahantahay inaad baarto muuqaal si faahfaahsan. Taasi waa waxa Redditor uu hadda sameeyay, isagoo ogaanaya waxa ugu fudud ee ugxanta badan ee ukunta Ista ee aan waligeen aragnay.
Waxaan inta badan ka wada hadalnay mid ka mid ah waxyaabaha daciifka ah ee shirqoolka Endgame iyo jiritaanka iyo maareynta maaddada Pym . Avengers-ka ayaa si fudud u dejin lahaa qorshe ka duwan taas oo u oggolaaneysa inay yeeshaan mug wanaagsan oo walxaha safarkooda ah. Si kastaba ha noqotee, haddii ficil kasta oo la soo dhaafay uu abuuro jadwal cusub, markaa maxaad u dhexgalin weyday dhalinyarada Hank Pym, u sheeg waxa socda oo weydiiso inuu gacan ka geysto inta ugu badan ee loo baahan yahay?
Waxyaabaha loo yaqaan 'Pym walxaha' sidoo kale waxay muhiim u yihiin imaatinka 2014 Thanos. Waa inuu dib ugalaabto naqshadaynta walxahaas ka hor intaanu Nelala markabka qaadan wakhtigaas. Taasi waa waxaan ka fikirnay goorta Endgame waxaa la bilaabay dabayaaqadii Abriil iyo wax in Marvel ayaa horey u xaqiijiyay .
Waxay ahayd inaan dib ugu noqonno khilaafyadan ku saabsan Pym Particle ka hor intaanan daawan shaashadda soo socota:  Source source: La yaabi Reddit
la daabacay Reddit Sawirku wuxuu muujinayaa xasuus-qorka safarka ee shaashadda wuxuu ku yaal shaashadda markii sharku nebula u yeerayo ciidanka aabihiis dhulkeenna. Feejignow sannadahan oo waxaad arki doontaa wax aan caadi ahayn. Qof ayaa mashiinka u isticmaalay inuu dib ugu laabto 2 988 av. BC, ama ugu yaraan way rabeen, waana sababtaas tan ay ugu jirto wargeysku.
Maxay tahay sababta aan u dooneynay inaan isku dayno safarkan? Maxay u laaban doonaan ilaa ilaha ugu weyn ee ay ugu baahan yihiin inay ku soo noqdaan waqtigoodii aan si dhaqso ah loo heli karin? Mid kale oo Redditor ah ayaa sharxaya in dagaalkii ugu horreeyay ee Svartalfheim uu dhacay sannadkaas. Tani waa dagaalkii ay Asgard kaga adkaadeen Dark Elves iyo Malekith, oo Aetherna halkaasuu ku sugnaa.
Waa hab lagu helo dhagaxa dhabta ah, laakiin daruuri maahan tan ugu fiican. Ugu dambeyntii, Rocket iyo Thor waxay ku laabteen Asgard 2013 si ay u soo saaraan Jane Foster's Ether.
Hadana muxuu wargeyskani halkan ugu yaal? Ayaa mas'uul ka ah isticmaalka mashiinka inuu dib ugu laabto illaa iyo hadda? Thor miyuu ku leexday 2988 BC si loo arko Bor, awoowayaashiis? Tani waxay u muuqataa wax aan macquul aheyn marka loo eego sakhraanka Thor inta ay qorsheynayeen Waqtiga Heist. Marka waa maxay sababta sanadkan ee wargeysku? Marvel wuu sharxi karaa waxyaalahan oo dhan wejiga 5 ee MCU, laakiin waqtigaas, waxaad hubin kartaa quudinta Reddit oo dhameystiran hoosta.